PressReader - Kwayedza: 2017-10-06 - Zvakaipira fesibhuku
Kwayedza - 2017-10-06 - Denhe Reruzivo - Munyaradzi Gunduza
(v) Kufambiswa kwemashoko MUDETEMBO rakanzi “Fesibhuku” rakanyorwa naEvidence Makuni rine dingindira rekufambiswa kwamashoko.
Nyanduri ari kushungurudzika nekuipa kwefesibhuku iyo yaita kuti vamwe vanhu vaite chipfambi, uye kupedza nguva zhinji vasingaiti basa vachingoita zvefesibhuku.
Nyanduri anoshungurudzika nenyaya yokuti nzenza dzave kutsvaga varume pafesibhuku seapo anoti, “Vachitandadzana kubva Matevere kusvika Nyanyadzi, nenzenza dzoti tawana pokuvhimira.”
Nyanduri anoshungurudzika kuti vanyarikani vave kutaurirana zvinyadzi nokuda kwefesibhuku seapo anoti, “Kuradzikana kwakadzama newe, ambuya nemukwambo vobhuya zvinyadzi.”
Mudetembo iri nyanduri anoshungurudzika zvakare nenyaya yokuti vamwe vanhu vave kuita chipfambi kuburikidza nefesibhuku seapo anoti, “Hezvo vamwe vokusvibisa zita vachiita chipfambi kubudikidza newe.”
4. Tsanangura maitiro avanhu ari kujekeswa naRabison Shumba munhetembo dzake shanu dziri mubhuku iri. 
Rabison Shumba anoburitsa maitiro avanhu akasiyana-siyana anobuda munhetembo dzinoti Nyakutumbura, Ndinoda mukoho wangu, Ndoenda hangu, Ndazozvidzora naNhaurwa muchizarira.
Mudetembo Nyakutumbura, nyanduri anojekesa kurwadziwa kunoita mubereki nekuda kwemwana asingakoshesi kwaakabva paanoti, “Kuuya kwako pano panyika pane akaita hanya nako hauna kudonha mudenga semvura.”
Nyanduri anoburitsa kuti vana vanotadza kukoshesa vabereki vavo vachidya mari dzavo vasingarangarire vabereki vavo sepaanoti, “Wakanganwa akarera neakapfekedza, wodya hako iyo nyika rutivi sewagarwa neshavi!”
Nyanduri anoburitsa kurwadziwa kunoita mubereki nemashoko aanoudzwa nemwana paanoti, “Nhasi worotomoka newako muromo, uchikanganwa akakudzidzisa kutaura.”
Nyanduri anojekesa kushingirira kunoita mubereki mukuchengetedza utano hwemwana paanoti, “Waiti ukakosora, nyakutumbura haarari, kutsvaga kupedza zvinopodza ako ose marwadzo.”